Soo-saareyaasha Bakhaarada & Wax-soo-Saarka Dhuxusha-Subc-Subcub-Shiinaha
H10Mn2 (EH14) silig alxarka alwaax ah
H10MnSi (EM13K) u isticmaalidda bir-karbo hooseysa iyo qaab dhismeedka aluminium hooseeya
Muhiim u ah alxamida birta kaarboon iyo hoose ee alxamidda qaab dhismeedka aluminiumka, sida kuleylka. markabka cadaadiska, weelasha tamarta nukliyeerka.we waxay bixiyaan saamiyo bilaash ah iyo lataliye bilaash ah. Waxaan kaloo iibsanaa dhammaan caymiska alaabadayada. Waxaad heli doontaa ganacsi badbaado leh.
H08MnA (EM12) soo-saarkii alaabada guriga ama weelka cadaadiska
EM12 (H08MnA) waa nooc silsilad bir ah oo bir ah oo alxamid ah. Welding with hargab ku habboon, seam alwaaxdu waxay heli kartaa guryaha farsamada leh ee aadka u fiican.
H08CrMoVA ee alxanka
H13CrMoA (EB2) Loogu talagalay alxamid maraakiibta cadaadiska u adkaysata kuleylka iyo tuubooyinka
waxaan sameyneynaa baaritaano badan. tusaale ahaan .tensile xoogga, elongation, V-nooca iyo wixii la mid ah.
H08CrMoA ee alxamida maraakiibta cadaadiska u adkaysata kuleylka iyo tuubooyinka